कांग्रेस व्यास नगर अधिवेशनः ‘सहमति नभए चुनावी मैदान’ – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun कांग्रेस व्यास नगर अधिवेशनः ‘सहमति नभए चुनावी मैदान’ – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
९ श्रावण २०७८, शनिबार १३:२२
दमौलीः नेपाली कांग्रेस व्यास नगर सभापतिका आकांक्षीहरुले आफ्ना पक्षमा सहमति नभए चुनावी मैदानमा जाने बताएका छन् । तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम सम्वादका लागि पत्रकार पवन पौडेललाई दिएको अन्र्तवार्तामा उनीहरुले आफू नै अब्बल भएको दावी गरे ।
सभापतिका प्रत्यासी सूर्यचन्द्र हड्खलेले आफूलाई सबै नेताको विश्वास र समर्थन पाएको दाबी गरे । ‘मलाई शीर्ष नेताहरुको साथ र समर्थन छ,’ उनल भने,‘म मेरै नाममा सहमति हुनेमा आशावादी छु । ’
अर्का प्रत्यासी डम्बर अधिकारीले आफू कुनै नेता मात्र नभै सबैको साझा उम्मेदवार भएको भन्दै आफूबेगरको सहमति मान्य नहुने बताए । ‘म सहमतिको पक्षमा छु,’ उनले भने,‘तर मबेगर सहमति भएमा प्रजातान्त्रिक पद्दती अपनाउँछु ।’
प्रत्यासी डा. शेषरमण न्यौपानेले भने आफ्नो अनुभव र योग्यताका आधारमा आफू आशावादी रहेको भन्दै सर्वसम्मतिका लागि सघाउन तयार रहेको बताए ।
उनीहरुसँगको सम्वाद शनिबार राती ७ः४० र ९ः २० मा प्रशारण हुने तनहुँ टेलिभिजनले जनाएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ९ श्रावण २०७८, शनिबार १३:२२ 212 Viewed